Mutemo weZimbabwe haubvumidze chingochani, izvo zvinogona kuita kuti Morris naAndrew vatongwe.
Mune chiitiko chaita kuti nyika yose izevezane, mumwe murume wekuChisuko kuHonde Valley mudunhu reManicaland, Morris Muchena, akapedza mwedzi gumi nemitanhatu achizviti munhukadzi mushure mekunge aroorwa naAndrew Chafa wemubhuku rekwaMadzinga, kwakare kuHonde Valley akatopembererwa usiku hwese.
Morris akanga achizivikanwa nevekwaakanga aroorwa sa 'Emily Muswere' achizviti aibva kwaMurehwa.
Asika, vakuru vakati “rine manyanga hariputirwi.”
Izvi ndizvo zvakazoitika kunaMorris sezvo chokwadi chakazoguma chabuda avarairwa.
Sabhuku Madzinga, VaWebster Mhuru, vemumusha mainge maroorwa Morris, vanoti murume uyu akazofumurwa mushure memutambo wenhabvu yemakumbo wakatambwa pakati pemadzimai emubhuku ravo nemadzimai ekuChisuko.
Mushure mekunge Morris ashaina achiratidza zvidovado zvake munhandare zvakanwisa veruzhinji mvura, mumwe mudzimai wekuChisuko anonzi ndiye akazowurura gure achitonhodza vekwaMadzinga vakanga vovhaira nekuve nemutambi airova nhabvu yepamusoro achiti 'Emily' aive munhurume waakatodzidza naye achinzi Morris.
Sabhuku Madzinga vanoti shoko iri rakazosvika kumusha kwaMorris izvo zvakazoita kuti hanzvadzi yaMorris iende kubhuku kwavo kunozvionera oga shura raainzwa rekuti ndikwo kwainge kwogara munhu wavaitsvaga kwemakore maviri ose asi vasingazivi kuti aive muberere mavo.
Pakutanga Morris anonzi akamboramba kuti akanga asingazivi hanzvadzi yake iyi, asi akazobvuma mushure mekunge akonwa nenyaya.
Achiedza kupukunyura, Morris anonzi akazoti akanga achitevera chitendero che Satanism izvo zvaiita kuti ange achiita semunhukadzi.
Panguva iyi murume wa’Emily’, Andrew, anonzi aive kuHarare uko akazoziviswawo nezvenyaya iyi.
Andrew anonzi akaratidzwa kukatyamadzwawo nazvo achibva angoti muchato ngaupere, vachibva vaita aziva kwake aziva kwake.
Asi sezvo nyaya iyi yakanga yasvitswa kare munzeve dzavanamugaradzakasungwa, vaviri ava vanonzi naSabhuku Madzinga vakabva vangotorwa nemapurisa, uko vanonzi vachiri kubvunzurudzwa uye vanogona kupomerwa mhosva yekuita zvehungochani.
Ukuwo, Sabhuku Madzinga vanoti vaviri ava kana vadzoka kubva kumapurisa zvisineyi kuti vawanikwa vaine mhosva here kana kuti kwete, vanovadawo kudare ravo sezvo vakaita chisionekwi mudzi webhwe nekukanganisa dunhu ravo kwavakaita.
Vanoti vachatoita chivanhu chekuchenura dunhu ravo kubva kuchipini chakaitwa nevaviri ava.
Hurukuro naSabhuku Madzinga